Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale | UW Medicine
Kani waa arjiga kaalmada dhaqaale (sidoo kalena loo yaqaan daryeelka samofalka) ee UW Medicine. Gobolka Washington waxa uu khasab kaga dhigay dhammaan isbitaalada inay bukaanka iyo qoyskooda siiyaan kaalmo dhaqaale kuwaas oo buuxiya shuruudo dakhli oo looga baahan yahay. Waxaad ugu qalmi kartaa Kaalmada Dhaqaale ee ku salaysan qoyskaagu inta uu le’eg yahay iyo dakhligaaga, xataa haddii aad leedahay caymis caafimaad. Kaalmada waxa abaalmarin loo bixiyaa haddii aad buuxiso shuruudaha Kaalmada Dhaqaale kuwaas oo ay kamid yihiin dakhliga qoyskaaga oo 300% ama kayar Heerka Saboolnimda Fadaraalka. Waxaad codsan kartaa xog dheeraad ah ama waxaad tixraaci kartaa boggayaga Kaalmada Dhaqaale ee www.uwmedicine.org/financialassistance ama www.valleymed.org/financialassistance.
Tilmaamaha Foomka Arjiga Kaalmada Dhaqaale (PDF)
​​​Maxay kaalmada dhaqaale bixisaa?
Kaalmada dhaqaale ee isbitaalku waxay bixisaa adeegyada aasaasiga ee isbitaalka ee ay bixisay UW Medicine taas oo ku xidhan u-qalmiddaada. Kaalmada dhaqaale waxaa dhici karta inayna wada debbarin kharashka daryeelka caafimaadka, taas oo ay kamid tahay adeegyada ay ururo kale bixiyeen.
Si arjigaaga looga hawlgalo waa inaad:
Xog naga siisaa qoyskaaga; Ku buuxi tirada xubnaha qoyskaaga guriga kula deggan (qoyska waxaa kamid ah dadka aad dhiiga wadaagtaan, guur isku kiin keenay, ama la korinayo ee aad wada deggan tihiin)​
Xog naga sii dakhliga qoyskaaga bishii (dakhliga kahor intaad cashuur ama wax kale laga jarin)
Dokumentiyo caddaymo ah oo muujinaya dakhliga iyo hantida qoyska noo keen
Ku lifaaq wixii xog ah ee dheeraad ah haddii loo baahdo, tusaale ahaan, warqad caddaynta ah oo aad ku xoojinayso xogtaada
Saxeex oo taariikhda ku qor foomka
Fiiro Gaar ah: Khasab ma aha inaad nasiiso lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti (Social Security number) si aad u dalbato kaalmada dhaqaalaha. Haddii aad na siiso lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waxay naga caawin inaanu dedejino hawlgalinta arjiga. Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti waxa loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo xogta aad na siisay. Haddii aanad lahayn lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti, fadlan ku calaamadee “ma khusayso” ama “NA.”
Usoo gudbi arjiga aad buuxisay iyada oo ay la socdaan dhammaan dokumentiyada caddayntu xarunta UW Medicine ee hoose. Waa inaad nuqul kala hadhaa.
Haddii aad wax su'aal ah qabto sidoo kalena aad u baahan tahay in lagaa kaalmeeyo buuxinta arjigan fadlan la xidhiidh xarunta kor ku qoran. Waxaad kaalmo ku heli kartaa sababo kala duwan, oo ay kamid yihiin naafonimada iyo kaalmada luuqadda.
Waxaanu kula socodsiin doonaa natiijada u-qalmidda iyo xaqa aad rafcaan kaga qaadan karto, haddii ay ku munaasab tahay, muddo 14 maalmood ah gudahood markaad soo xaraysay arjiga kaalmada dhaqaalaha, oo ay kujiraan dokumentiyada dakhliga.
Gudbinta arjiga kaalmada dhaqaalaha, waxaad noo oggolaatay inaanu samayno wixii baadhitaan ah ee aanu ku xaqiijinayno waajibaadka dhaqaale iyo xogtaada.
Waxaanu doonaynaa inaanu ku caawino. Fadlan arjigaaga si dhakhso ah u soo gudbi!
Waxaa dhici kartaa in biilka laguu soo diro ilaa aanu xogtaada helayno.